ဘုရားသခင် အမည်မှည့်ပေးသည် | Myanmar Our Daily Bread
ဖတ်ရန် ရုသဝတ္ထု ၁:၁၉-၂၂ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ □ ဆာ ၈၁-၈၃ □ ရော ၁၁:၁၉-၃၆
သူကလည်း နောမိဟူ၍မခေါ်ပါနှင့်။ မာရဟူ၍ခေါ်ပါ။ အနန္တတန်ခိုးရှင်သည် ငါ့အား အလွန်ခါးသောအရာကို ပေးတော်မူပြီ။ [ ရု ၁:၂၀ ]
Riptide. Batgirl. Jumpstart စသည်တို့မှာ ကျွန်မတို့မိသားစု နှစ်စဉ် တက်ရောက်သည့် နွေရာသီသင်တန်း၌ အတိုင်ပင်ခံဆရာများကိုပေးထားသည့် အမည်များဖြစ်၏။ ထိုအမည်ကို အရွယ်တူသူငယ်ချင်းများက ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် မျက်နှာပူစရာကိစ္စ၊ ရယ်စရာအမူအကျင့်၊ ဝါသနာများကိုအစွဲပြုပြီး သင်တန်းနာမည်ပြောင်ဖြင့် အခေါ်ခံရသည်။
သင်တန်းများ၌သာ နာမည်ပြောင်များမှည့်ခေါ်ခြင်း မဟုတ်၊ ကျမ်းစာထဲ၌ လည်း ခေါ်ဆိုအသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဥပမာ – ရှင်ယေရှုက တပည့်တော် ယာကုပ်နှင့် ယောဟန် တို့ကို “မိုးကြိုးသားများ” (မာ ၃:၁၇) ဟုခေါ်သည်။ ကျမ်းစာ ထဲ၌ တစ်စုံတစ်ဦးက မိမိကိုယ်ကို နာမည်ပြောင်ပေးခြင်းက ရှားသော်လည်း နောမိ အမည်ရှိသည့် အမျိုးသမီးက လူများကို သူ့အား “ခါးသီးခြင်း” ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့် “မာရ” ဟု ခေါ်ရန် ပြောသည့် အဖြစ်အပျက်ရှိပါသည် (ရု ၁:၂၀)။ သူ့ခင်ပွန်းသည် နှင့်သားနှစ်ဦး သေဆုံးသွားသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်သည် သူ့ဘဝကို ခါးသီးစေသည်ဟု သူခံစားရသည် (:၂၁)။
ထိုယူကျုံးမရဖြစ်ရသည့်ဆုံးရှုံးမှုများက နောမိ၏ဇာတ်သိမ်းမဟုတ်သည့် အတွက် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်မှည့်ခေါ်သောနာမည်သစ်က အမည်မတွင်ခဲ့ပါ။ ရုသ ဆိုသည့် ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောချွေးမအားဖြင့် ဘုရားသခင် သူ့ကိုကောင်းချီးပေး ခဲ့သည်။ ရုသသည် နောက်အိမ်ထောင်ပြု၍သားတစ်ဦးရရှိကာ နောမိအတွက် မိသားစုကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲ၊ လုပ်မိသည့်အမှားများအပေါ် မူတည်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိကိုယ်ကို “အရှုံးသမား”၊ “မုန်းစရာ” စသည့် နာမည်ပြောင်များ မှည့်ခေါ်ရန် သွေးဆောင်ခံရသော်လည်း ထိုအမည်များက ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်သိမ်း မဟုတ်ပါ။ ထိုအမည်များအစား ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီကိုမှည့်ပေးသည့် “ငါ၏လူ” “အချစ်” (ရော ၉:၂၅) ဟူသော အမည်များနှင့် အစားထိုးနိုင်ပြီး အခက်ခဲဆုံးအချိန်များ၌ပင်လျှင် ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့်နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ LISA M.SAMRA
လူတစ်ဦးဦးက သင့်ကိုမှည့်ခေါ်သည့် နာမည်ပြောင်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထိုအမည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်ဘာကိုကြိုက်ပြီး ဘာကိုမကြိုက်သနည်း။ ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသော သားသမီးဟု အခေါ်ခံရခြင်းက မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအမြင်အား မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။
ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘဝအခြေအနေနှင့်အတွေ့အကြုံများက ကျွန်ုပ်ကို အဓိပ္ပာယ်မသတ်မှတ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ အရှင်၏သားသမီးဟုခေါ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။